I-PEEL KUNYE NE-STICK BACKSPLASH PROS & CONS - UYILO LWEKHITSHI
Eyona uyilo Lwekhitshi I-Peel kunye ne-Stick Backsplash Pros & Cons
I-Peel kunye ne-Stick Backsplash Pros & Cons
Apha sabelana ngesikhokelo sethu kwikhitshi lekhitshi kunye nokuncamathela kulungelelwaniso kunye neengozi kubandakanya iintlobo ezahlukeneyo, izixhobo kunye neendleko.
I-tile yesiqhelo, isitena kunye nelitye elingumqolo longeze ukujonga okugqityiweyo kwiikhikhini nakwizindlu zangasese kwaye ubophe uyilo lwegumbi kunye. Ukubuyela umva kuthintela ukuntywila kwamanzi kunye nokutya ekutyhobozeni eludongeni, okwenza kube lula ukucoceka.
Nangona i-backsplash eyenziwe ngezinto ezizinzileyo ibonakala intle, akukho lula ukuyifaka kwaye yinto ebiza kakhulu. Endaweni yoko, abaninimzi banokukhetha i-peel-and-stick backsplash ukugcina iindleko zabo ziphantsi kwaye banokuzifaka ngokwabo.
Kule nqaku, siza kuxubusha i-peel-and-stick backsplash pros and cons, yintoni le mveliso eyenziwe ngayo, kunye nokukhethwa kwezinto kunye neentlobo ze-backsplash ye-peel-and-stick.
Yintoni iPeel-and-Stick Backsplash?
I-Peel kunye ne-Stick Backsplash Pros
I-Peel kunye ne-Stick Backsplash Cons
I-Peel kunye ne-Stick Backsplash Cost
Iindidi ze-Peel kunye ne-Stick Backsplash
I-Peel-and-stick backsplash yenziwe ngezinto ezininzi kwaye ifana negama; Abanini bamakhaya banokucoca nje inkxaso kwaye babambelele kumphezulu.
Ngelixa oko kuvakala kuyinto yakudala, i-peel-and-stick backsplash yindlela engabizi kwaye elula yokwenza udonga oluhle ekhitshini, kwigumbi lokuhlambela, kunye namagumbi eluncedo akhusela udonga.
Kulula ukuyigcina; sula nje ngengubo efumileyo. Abaqulunqi bajikajika kwi-peel-and-stick backsplash xa befuna impendulo elula yokuphotha igumbi ekhayeni.
Ngenxa yokuncamathela okuqinileyo ngasemva nangokusebenzisa izinto ezinganyangekiyo ngamanzi, i-peel-and-stick backsplash yenye indlela ehlala ihleli I-ceramic tile ubuyela umva. Ikopa imbonakalo yethayile yokwenyani kwaye ayifuni daka, grout, okanye iimveliso ezingcolileyo ezifunekayo ukufakela umva backsplash.
• Ukumelana namanzi kwaye ezinye iintlobo ziyakwazi ukumelana nobushushu
• Ulondolozo olusezantsi
• Ixabiso eliphantsi kunendlela yendabuko yokubuyela umva
• Akukho fakelo lumdaka; linganisa, usike, uxobule, kwaye unamathele
• Inikezela ngeendlela ezininzi, imibala, imibala, kunye noyilo
• Khusela iindonga emanzini nakukutshiza kokutya
• Ezinye iintlobo kunye neempawu zingamelana nokufuma okanye ubushushu
• Kunzima ukulungelelanisa iiseyile kunye nemiphetho yevenkile kunye nolunye udonga
• Ayiboneleli ngobunzulu bezinto zokwenene ezenziwayo
• I-peel-and-stick yodidi oluphezulu inokubiza ngetayile yokwenene
• Aziveli lula, mhlawumbi zonakalise udonga okanye umphezulu ongezantsi
• Ayinakusetyenziselwa ishawa okanye ibhafu
• Ayizukusebenza eludongeni ngaphandle kwendawo ethe tyaba
• Iglu ngasemva inokuwohloka ukufuma, ibangele ukuxobuka
• Iimveliso zeVinyl zihlala ngathi zinombala ngokuhamba kwexesha
Kubanini bamakhaya abafuna indlela elula yokongeza i-backsplash kumagumbi okuhlambela, amagumbi okusetyenziswa, okanye amakhitshi, iimveliso zokubuyela umva kunye nokunamathela zinika ukhetho olufanayo njengokubuyela umva kwesiqhelo ngaphandle kofakelo olonakeleyo kunye neendleko eziphezulu.
Le backsplash yokuzibonelela inikezela ngemibala emininzi, iipateni , kunye nezixhobo zokusebenza kunye nayiphi na imihlobiso.
Nangona i-peel-and-stick backsplash ibonakala ngathi iyimpendulo yexabiso eliphantsi kuphuculo lwasekhaya, izibonelelo zingaphezulu kobunzima bezinto ezikhethiweyo zokubuyela umva ngokwesiko.
Ngaba-ngokwakho-wamkela ukufakwa okulula kwe-peel-and-stick backsplash kunye neendleko zokugcina zenza le projekthi yezoqoqosho.
Iseti yezikwere ze-vinyl ezikwi-peel-and-stick zigubungela malunga ne-6 ukuya kwi-8 yeenyawo zomgangatho wobuso kunye neendleko ukusuka kwi- $ 8 ukuya kwi- $ 12.
Iithayile zohlobo lwe-peel-and-stick ezinemilinganiselo emithathu ezenziwe ngezinto ezifana neglasi okanye iindleko zentsimbi ngaphezulu, zibaleka ziphakamileyo njenge- $ 10 kwipaneli enye. Ezinye iimveliso ziza njengeethayile ezizodwa ngelixa ezinye zenziwe kwimakhishithi okanye kwimiqulu.
Izinto ezisetyenziselwa ukwenza i-peel-and-stick backsplash range ukusuka kwi-vinyl, i-silica gel eqinile, kunye neziqwenga ezincinci zezinto zendalo ezifana nomama weperile kunye neglasi.
I-Vinyl peel-and-stick backsplash ine-foam okanye i-plastic backing kwaye iza ngemibala emininzi, iipateni, okanye iifoto ze-3D ezibonakalayo zezinto zendalo ezifana nesilayiti, isitena, ilitye okanye ukhuni.
Olu hlobo lwe-peel-and-stick lusebenza kakuhle xa lufuna ukwenza udonga lwezitena olujikeleze indawo yomlilo kwaye umninikhaya akanalo ixesha okanye imali yeprojekthi enkulu.
I-PVC ye-peel-and-stick backsplash yenziwe nge-PVC eyiyo kwaye iithayile ziyahambelana ngaphandle komthungo. Umphezulu unobumba obufana nethayile yokwenyani kwaye iipaneli zinobushushu kwaye ziyamelana namanzi ukuze zisetyenziswe ekhitshini okanye kwigumbi lokuhlambela.
Zikwachasa ukungunda kunye nokuchasana neentsholongwane. Nangona ingenamthungo, sebenzisa ishawa okanye ibhafu isenokuba kukufuma okuthe ngqo. Jonga umenzi ngamnye.
Iindidi ezininzi ze-peel-and-stick backsplash zenziwe ngezinto zokwenyani; imicu emincinci okanye iibhloko zezinto ezisikiweyo zinqunyiwe kwaye zibandakanya umaleko weglu eyomeleleyo ngasemva.
Izinto zendalo ziyala ukuxubana nexesha nokucoca rhoqo, kodwa i-vinyl kunye nejeli, kuxhomekeke kumgangatho, zihlala zitshona.
Olunye uncedo lwezixhobo zendalo bubunzulu kunye nobukhulu obonelelweyo. Izinto zendalo zibonelela ngobume bokwenyani ngaphezulu kwejeli kunye nevinyl. I-Gel peel kunye ne-backsplash yokuphakama inokuphakama kodwa i-vinyl ithe tyaba ngokupheleleyo, iyenza ngamanye amaxesha ijongeke njengexabiso eliphantsi okanye inkohliso.
Izinto zendalo zikwabeka emngciphekweni wokufuna ukugqiba umsebenzi nge grout. Izithuba phakathi kwezinto zokwenyani azinanto. Ngaphandle kwe-grout, iya kubonakala ingagqitywanga. I-grout esele ikulungele yenza ukuba umsebenzi ube lula, kodwa i-grout isadidekile.
Igumbi lokuhlambela elihle kunye ne-stick stick backsplash lenziwe ngeebhloko zeetiles ze-shell ze-pearl. Ibhloko nganye yi-1 x 1 kwaye ibekwe kumacala angama-intshi e-12-intshi.
Inkathalo ethe kratya iyafuneka ukusika kunye nokusebenzisa le ntsimbi ye-peel-and-stick, kodwa iziphumo kufanelekile. Ukongeza, nje ukuba zifakiwe kunokuba nzima ukuzisusa.
ikhabethe lekhitshi leenkuni
Ukuba usebenzisa oku kumphezulu wecomputer kuyacetyiswa ukuba uyitywine mosaic yegobolondo usebenzisa i-sealer yobuchwephesha enjengeDuPont StoneTech okanye i-511 Impregnator.
Isinyithi yenye into ekulula ukuyisebenzisa xa usenza i-peel-and-stick backsplash.
Amacandelo angama-1 eenyawo zenziwe ngentsimbi ekhanyayo kunye necekeceke, ngesiqhelo ialuminium, enamathelayo ngasemva.
Isinyithi sihamba sibiza kakhulu kunezinye iintlobo ze-backsplash ye-peel-and-stick.
I-gel ye-silica eqinisiweyo inomgangatho obunjiweyo ofana nethayile yokwenyani okanye umphezulu ogudileyo ofana neglasi.
Ijeli yimveliso ye-3D kwaye ibonisa ngokuchanekileyo i-subway tile backsplash , iglasi ye wavy kwimibala eyahlukeneyo, kunye nethayile yelitye.
Iindawo kufuneka zibe tyaba, zomile kwaye zicoceke ukufakela ezi ntlobo ze-backsplash.
Eyona nto ibiza imali eninzi kukujongeka okukhazimlayo kweglasi ebonakalayo. Ezi paneli zibaleka malunga ne- $ 25 ngonyawo wesikwere.
Ezinye iintlobo zeglasi ye-peel-and-stick backsplash ziyafumaneka kwaye zibiza kakhulu.
Ukuqinisekisa ukuba iithayile zihlala zibekiwe zihlala zifakwa nge 'Thin-set' okanye 'Insta-set' ukubanceda bahlale behleli.
Unokufumana i-premium peel kunye ne-stick back backplash eyenziwe kwilitye lokwenene. Aspect peel-and-stick backsplash lukhetho olunamaxabiso aphakathi ngokomndilili weedola ezili-15 ngonyawo wesikwere.
Ngokwesiqhelo unokufumana ilitye kwiitoni zomhlaba ezinokuthi zidibane kakuhle nezitayile zerustic okanye zesiko. Kuba amatye okubonisa enziwe kwilitye lokwenyani linempawu ezizodwa okanye ilitye lokwenyani elinika ipaneli nganye umahluko owahlukileyo.
Kukho izinto ezingabizi kakhulu ezingasetyenziswayo ezikhoyo eziya kuthi zibize imali encinci. Nangona kunjalo, banobunzulu bokubonakalayo okanye bajongeke kancinci kunokoqobo.
Olunye uhlobo lwe-back-and-stick backsplash yendalo luyimveliso eyenziwe nge-aluminium kunye nokufaneleka kwezinto ezinobunzima be-vinyl ezifana nobhedu.
Ezi tile ziyasikwa ngokulula ngemela yesixhobo kwaye zibonelela ngokusetyenziswa okuhlala ixesha elide. Uninzi lwabavelisi banikezela iwaranti yeminyaka engama-20.
Le backsplash ukufuma, umphunga, i-chip, kunye nobushushu obunganyangekiyo ukuya kuthi ga kwiidigri ezili-190.
Ngaba unawo amava wokusebenzisa i-peel kunye nokunamathela kwitiles yokubuyela umva? Sazise ukuba uhambe njani. Ukufumana umxholo onxulumene noko ndwendwela igalari yethu iintlobo zeethayile zangasese Apha.
Umnumzana ms miss intsingiselo
Umakhulu kamakhulu kamalokazana unxiba
Ivesi elikhuthazayo lebhayibhile ngothando